China Factory Type Type Disc Type Jet Mill ary mpanamboatra | Qiangdi
Karazana kapila (Ultrasonic / Pancake) Mill Mill. Ny fitsipika mifehy: miasa amin'ny rivotra tsentsina amin'ny alàlan'ny tsindrona sakafo, ny akora haingana dia haingana ho amin'ny hafainganam-pandeha ultrasonic ary atsofoka ao amin'ny efitrano fikosoham-bary amin'ny lalana azo tsapain-tànana, nifandona ary nanjary boribory.
Karazana kapila (Ultrasonic / Pancake) Mill Mill. Ny fitsipika mifehy: miasa amin'ny rivotra tsentsina amin'ny alàlan'ny tsindrona sakafo, ny akora haingana dia haingana ho amin'ny hafainganam-pandeha ultrasonic ary atsofoka ao amin'ny efitrano fikosoham-bary amin'ny lalana azo tsapain-tànana, nifandona ary nanjary boribory. Ny haben'ny sombiny dia azo fehezina amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny halalin'ny halavirana, ny fanerena ary ny hafainganam-pandehan'ny sakafo. Disc type Jet Mill dia mahomby amin'ny fitaovan'ny gummy.
1. Mety amin'ny fizotran'ny karazana main-dry zareo, ny hafainganam-pandeha avo indrindra hatramin'ny 2.5 martsa ary ny voany 1-10um mahazatra. Azonao atao ny manoto imbetsaka hahatratra ny haben'ny vokatra.
2. Fahombiazana tsara amin'ny akora gummy, viscosity, henjana ary fibre tsy misy sakana.
3. Tsy misy fiakaran'ny maripana, mety amin'ny fitaovana mora miempo sy mihetsiketsika.
4. Tombony: endrika tsotra, mora diovina sy fikojakojana, tabataba ambany, tsy misy fihoaram-pefy. Ity fitaovana ity dia manana fahaiza-mamotika mahery vaika sy fanjifana angovo ambany.
5. Misy vokany pulverization tena tsara amin'ny fitaovana rehetra, indrindra fa ny ahitra sinoa sy ny fanafody sinoa.
6. Ity milina ity dia matevina amin'ny firafiny, mora ampiasaina ary mora apetraka ary esorina.
7. Ny keramika injeniera dia mahazaka-mahatohitra, mahatohitra harafesina, maharitra ela ary tsy mandoto fitaovana.
Tabilao fandosiran'ny Mill Mill-bed am-pandriana
Ny tabilao mikoriana dia ny fanodinana fikosoham-bary mahazatra ary azo ahitsy ho an'ny mpanjifa.
Ny rafitra dia mampiasa fanaraha-maso efijery manan-tsaina, fandidiana mora ary fanaraha-maso marina.
Izy io dia ampiharina betsaka hanamafisana ny fikolokoloana amin'ny sehatry ny famonoana bibikely, ny simika simika ary ny indostrian'ny fanafody. Ho an'ny karbendazim. topsin ofisialy, famonoana poizina, gel silika aero, loko pigment ary kortisone.
Fahafahana （kg / h)
0.2 ～ 30
30 ～ 260
80 ～ 450
Fanjifana rivotra (m / min)
Fanerena miasa (Mpa)
0.75 ～ 0.85
60 ～ 325
Grlnding Size （um)
0,5 ～ 30
Herin'ny fanjifana angovo
Ohatra amin'ny fampiharana ampahany
Kunshan Qiangdi Fitotoana Vary Fitaovana Co., Ltd dia orinasa matihanina manana teknolojia avo lenta manao fitaovana R&D, famokarana sy varotra. Izay misy ao amin'ny Jiangnan watertown-Youde Road, Zone Tech-Tech, Tanàna Kunshan, Faritanin'i Jiangsu. Manompo an-tsitrapo hatrany ny mpanjifanay hatrany izahay. ary manantitrantitra ny fitsipika "Quality voalohany, Miezaha ho an'ny fanavaozana sy ny fampandrosoana" hanome vahaolana ankapobeny ho an'ny mpanjifa manana kalitao.
Ankoatr'izay, nandalo ny fanamarinana kalitaon'ny orinasa ISO9001: 2008 izahay.
Manana injenieran'ny teknolojia fikarohana sy fampandrosoana maro izahay izay manana traikefa asa mihoatra ny 20 taona amin'ny orinasa goavambe, amin'ny maha orinasa tsy miankina anay, manana tombony azo ovaina ihany koa izahay amin'ny vidin'ny famokarana, ny fanavaozana ny teknolojia, ny fotoana famokarana ary ny fandefasana, indrindra ny fitantanana serivisy aorian'ny fivarotana. Mifantoka amin'ny fampandrosoana sy ny famokarana fitaovana avo lenta farany izahay, ny vokatra lehibe dia misy ny fikosoham-bary am-pandriana, ny karazana disk jet supersonic jet, ny jet ultrafine pulverizer, ny fanasokajiana ny rivotra, ny fikolokoloana ary ny milina fanaovana sakafo eny ambanin'ny GMP / FDA. , rafitra famonoana bibikely manimba tontolo iainana manan-tsaina sy rafitra fampifangaroana ary rafitra manaparitaka jet-explosion marani-tsaina sns. Ary izahay koa dia mahay mianatra ny mpanjifa mba hahafahanay manome serivisy sy vahaolana tsara kokoa ho azy ireo.
Manondrana ny vokatra any amin'izao tontolo izao izahay: Amerika, Eropa, Aostralia, Afrika sy Azia atsimo atsinanana ary faritra hafa eto amin'izao tontolo izao, toa an'i Alemana, Pakistan, Korea, Vietnam, India, Italia, Birmania sns Misaotra ny fahatokisan'ny mpanjifanay miaraka ny ezaka ataontsika, ny orinasa QiangDi dia nitatra izaitsizy tato anatin'ny taona vitsivitsy.
Saingy tsy mitsahatra ny mikatsaka ny hatsarana izahay ary maniry mafy ny hizara an'ity orinasa mampanantena ity amin'ny mpiara-miombon'antoka rehetra amin'ny fomba roa.
1. Manaova vahaolana tsara sy famolavolana mifanaraka amin'ny mpanjifa akora sy fangatahana fahaiza-manao.
2. Manaova famandrihana ho an'ny fandefasana avy amin'ny orinasa Kunshan Qiangdi mankany amin'ny ozinin'ny mpanjifa.
3. Omeo fametrahana sy fanendrena, fiofanana eo an-toerana ho an'ny mpanjifa.
4. Omeo boky fampianarana anglisy ho an'ny milina feno ny mpanjifa.
5. Fiantohana fitaovana sy serivisy aorian'ny fivarotana mandritra ny androm-piainany.
6. Azontsika atao ny mizaha toetra ny fitaovanao amin'ny fitaovanay maimaim-poana.
Miasa ho mpanolotsaina tsara sy mpanampy ny mpanjifa hahafahan'izy ireo manankarena sy manome malala amin'ny fampiasam-bolany.
1. Ampahafantaro amin'ny antsipiriany ny vokatra, valio tsara ny fanontaniana napetraky ny mpanjifa;
2. Manaova drafitra hisafidianana arakaraka ny filàna sy takiana manokana an'ny mpampiasa amin'ny sehatra samihafa;
3. Fanohanana fanandramana santionany.
4. Jereo ny Factory.
1. Hamarino tsara ny vokatra amina kalitao avo lenta mialoha ny fanaterana;
2. Manaterà ara-potoana;
3. Omeo antontan-taratasy fenoina ho takian'ny mpanjifa.
Serivisy aorian'ny fivarotana:
Omeo serivisy mandanjalanja mba hampihenana ny ahiahin'ireo mpanjifa.
1. Injeniera ampiasaina amin'ny milina fanompoana any ivelany.
2. Manomeza antoka 12 volana aorian'ny fahatongavan'ny entana.
3. Manampy ny mpanjifa hiomana amin'ny drafitra fananganana voalohany;
4. Mametraka sy manafoana ny fitaovana;
5. Ampiofano ireo mpandraharaha laharana voalohany;
6. Diniho ny fitaovana;
7. Mandraisa andraikitra mba hamongorana haingana ireo olana;
8. Manomeza fanampiana ara-teknika;
9. Mametraha fifandraisana maharitra sy mpinamana.
1.Q: Ahoana no azoko itokisana amin'ny kalitao?
1). Ny masinina rehetra dia hosedraina tsara amin'ny atrikasa QiangDi alohan'ny fandefasana.
2). Izahay dia manome antoka iray taona ho an'ny fitaovana rehetra sy ny serivisy aorian'ny fivarotana mandritra ny androm-piainany.
3). Azontsika atao ny mizaha toetra ny fitaovanao amin'ny alàlan'ny fitaovantsika alohan'ny hametrahana ny filaminana, hahazoana antoka fa mifanaraka amin'ny tetikasanao ny fitaovantsika.
4). Ny injenieranay dia handeha any amin'ny orinasa misy anao hametraka sy hamono ny fitaovana, tsy hiverina izy ireo raha tsy afaka mamokatra vokatra mahafeno fepetra ireo fitaovana ireo.
2. F: Inona ny fahambonianao mampitaha amin'ireo mpamatsy hafa?
1). Ireo injenierantsika matihanina dia afaka manao ny vahaolana mety indrindra mifototra amin'ny karazana akora, fahaiza-manao ary ny hafa takiana aminao.
2). Qiangdi dia manana injenieran'ny teknolojia fikarohana sy fampandrosoana maro manana traikefa mihoatra ny 20 taona, mahery ny fahaizantsika R&D, afaka mampivelatra teknolojia vaovao 5-10 isan-taona.
3). Manana mpanjifa goavambe marobe amin'ny agrochemical, fitaovana vaovao, sehatry ny pharmaceutika erak'izao tontolo izao ,.
3. F: Inona no serivisy azontsika omena ho an'ny fametrahana milina sy ny fihazakazahana fitsapana? Inona ny politika fiantohana anay?
Valiny: Mandefa injeniera amin'ny tranokalan'ny mpanjifa izahay ary manolotra torolàlana sy fanaraha-maso teknika eo an-toerana mandritra ny fametrahana ny masinina, ny fahazoan-dàlana ary ny fizahana. Manolotra fiantohana izahay 12 volana aorian'ny fametrahana na 18 volana aorian'ny fandefasana.
- Manolotra serivisy mandritra ny androm-piainanay ho an'ny vokatra masininay aorian'ny fandefasana azy, ary hanaraka ny satan'ny milina miaraka amin'ny mpanjifanay aorian'ny fametrahana milina mahomby ao amin'ny ozin'ireo mpanjifanay.
4. F: Ahoana no hampiofanana ny mpiasa momba ny fandidiana sy ny fikojakojana?
Valiny: Hanome sary an-tsipiriany momba ny fampianarana izahay mba hampianarana azy ireo amin'ny asa sy fikojakojana. Ho fanampin'izany, ny injenieranay ho an'ny fivorian'ny mpitari-dalana dia hampianatra ny mpiasao eo an-toerana.
5. F: Inona ny teny fandefasana atolotray anao?
Valiny: Afaka manome FOB, CIF, CFR sns mifototra amin'ny fangatahanao izahay.
6. F: Inona ny teny fandoavam-bola rainao?
Valiny: T / T, LC amin'ny fahitana sns.
7. Aiza ny orinasa misy anao? Ahoana no fomba hitsidihako any?
Valiny: Ny orinasanay dia any amin'ny tanàna Kunshan, faritanin'i Jiangsu, Sina, no tanàna akaiky indrindra an'i Shanghai. Azonao atao ny manidina mivantana any amin'ny seranam-piara-manidina Shanghai. Afaka mandray anao amin'ny seranam-piaramanidina na gara izahay sns.
Teo aloha: Rafitra WP-WDG – Ampiharo amin'ny sehatry ny agrochemical
Manaraka: Jet Mill Mill-fandriana GMP FDA